नेपाल आउने अमेरिकन क्रिकेट टिममा भारतीय, अस्ट्रेलियन र दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी! | | Neplays.com
नेपाल आउने अमेरिकन क्रिकेट टिममा भारतीय, अस्ट्रेलियन र दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी!
By Neplays	 Last updated Jan 22, 2020
अर्को महिना नेपाल र ओमानसँग आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ का लागि अमेरिकाले १४ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर मैदानमा हुने प्रतियोगिताका लागि अमेरिकाले हालै युएई भ्रमण गरेको टिमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । युएईमा चार मध्ये तीन खेल जितेको टिम नै नेपाल आउन लागेको हो । नेपाल आउनुअघि अमेरिकन टिमले भारतको मुम्बईमा अभ्यास गर्ने पनि जनाइएको छ ।
अमेरिकाले सौरव नेत्रभाल्करको कप्तानीमा सिरिज खेल्ने छ । उनी बलर हुन् ।
सौरव नेत्रभाल्कर : भारतीय मुलका सौरबले पपुवा न्युगिनीविरुद्ध २०१९ मा डेब्यु गरेका थिए । अहिलेसम्म ९ वटा एक दिवसीय क्रिकेटमा १३ विकेट लिएका छन् ।
स्टेभन टेलरः लेफ्ट ह्याण्डेड ब्याट्सम्यान हुन् । उनले पनि २०१९ मै डेब्यु गरेका थिए । ९ खेलमा अहिलेसम्म १८२ रन बनाउँदा सर्वाधिक ठूलो स्कोर ५६ रन हो ।
कारिम गोरे : उनी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बलर हुन् । अहिलेसम्म ७ एक दिवसीय क्रिकेटमा उनले ९ विकेट लिएका छन् । यसैगरी ब्याटिङ पनि गर्ने उनले ११२ रन बनाएका छन् । उनको उच्च स्कोर ३१ रन हो ।
इयान होल्याण्डः इंग्ल्याण्डका ह्याम्पसायरबाट काउन्टि क्रिकेट पनि खेलेका छन् । अलराउण्डर उनले ४ एक दिवसीय क्रिकेटमा ७६ रन जोडेका छन् । सर्वाधिक स्कोर ४४ रन हो । उनले अहिलेसम्म बलिङबाट ५ विकेट पनि लिएका छन् ।
अक्क्षे होमराजः उनी अमेरिकन क्रिकेट टिमको विकेटकिपर ब्याट्सम्यान हुन् । गत वर्षमात्रै एक दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यु गरका होमराजले ४ पारिमा ९९ रन बनाएका छन् । उनको सर्वाधिक स्कोर ३४ हो । विकेट किपङ गर्दा ७ जना विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई क्याच आउट गरेका छन् ।
एलमोर हुचिनसनः अमेरिकन टिमका सवैभन्दा पाका खेलाडी हुन् । ३७ वर्षीय हुचिनसन जमैकाका हुन् । उनी राइट ह्याण्ड ब्याट्सम्यान र लेफ्ट आर्म मिडियम पेस बलर हुन् । उनले बलिङबाट अहिलेसम्म विकेट हात पार्न सकेका छैनन् भने उनको ब्याटबाट ७१ रन बनेको छ । उनको सर्वाधिक स्कोर नट आउट ४२ रन हो ।
आरोन जोन्सः राइट ह्याण्डेड ब्याट्सम्यान हुन् । २५ वर्षीय जोन्सले अहिलेसम्म ९ एक दिवसीय क्रिकेटमा ३४८ रन बनाएका छन् । उनको सर्वाधिक ठूलो स्कोर ९५ रन हो । करियरमा तीन पटक अर्धशतक बनाइसकेका छन् ।
नोस्तुस केनिइजीः लेफ्ट आर्म स्पिन बलर हुन् । उनले एक दिवसीय क्रिकेटका ४ खेलमा ३ विकेट लिएका छन् । चार खेलमा २ पटक ब्याटिङमा आएका उनले अहिलेसम्म ७ रन जोडेका छन् । उनको सर्वाधिक स्कोर ६ रन हो ।
जाभिएर मार्सलः उनी जमैकाका हुन् । ३३ वर्षीय मार्सलसँग टेस्ट क्रिकेट खेलेको पनि अनुभव छ । टेस्ट क्रिकेटमा उनले २४३ रन बनाएका छन् । एक दिवसीय क्रिकेटमा सन् २००५ मै डेब्यु गरेका मार्सलले ३३ खेलमा ५४२ रन बनाएका छन् । उच्च स्कोर नट आउट १५७ रन हो । उनले करियरमा १ पटक शतक र २ पटक अर्धशतक बनाएका छन् । उनी अफ स्पिन बलर पनि हुन् ।
मोनाक पटेल : उनी भारतीय मुलका हुन् । विकेट किपर ब्याट्सम्यान हुन् । उनले ९ खेलमा २८२ रन बनाएका छन् । उच्च स्कोर ८२ रन रहेका पटेलले २ पटक अर्धशतक पनि बनाएका छन् ।
निसर्ग पटेलः उनी भारतीय मुलका हुन् । राइट ह्याण्ड ब्याट्सम्यान तथा स्लो लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बलर हुन् । उनले ६ एक दिवसीय क्रिकेटमा ८८ रन बनाएका छन् भने सर्वाधिक स्कोर ४० रन हो । यसैगरी बलिङ तर्फ ७ विकेट हात पारेका छन् ।
तिमिल पटेलः ३६ वर्षीय पटेल भारतीय मुलका खेलाडी हुन् । अलराउण्डरको रुपमा अमेरिकाका लागि ५ खेलमा ५५ रन बनाउँदा सर्वाधिक स्कोर नट आउट ५० रन जोडेका छन् । उनले ६ विकेट पनि लिएका छन् ।
क्यामरुन स्टेभनसनः उनीसँग विग ब्यास लिग खेलेको अनुभव पनि छ । उनले मेलवर्न रेनेगेड्सबाट २०१५ मा बिग ब्यास खेलेका थिए । उनी अस्ट्रेलियन क्रिकेटर हुन् । उनले चार इनिङमा ३८ रन बनाएका छन् । उनको सर्वाधिक स्कोर ३४ रन नट आउट हो । बलिङ तर्फ भने उनले अहिलेसम्म ९ विकेट हात पारेका छन् ।
रोस्टे थिरोनः उनी दक्षिण अफ्रिकी मूलका क्रिकेटर हुन् । उनले दक्षिण अफ्रिकबाट एक दिवसीय क्रिकेट खेलिसकेका छन् । फास्ट बलर थिरोनले अहिलेसम्म ९ खेलमा १७ विकेट लिइसकेका छन् ।
त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि अमेरिकी टीमकाे घोषणा, मुम्बईमा अभ्यास गर्ने
कोलकाता नाइट राइडर्सको पहिलो जित
काेलकातासामू हैदराबादकाे १४३ रनकाे लक्ष्य
हैदरावाद टस जितेर ब्याटिङ गर्दै
मुलपानीकाे माथिल्लाे मैदानकाे काम धमाधम (तस्विरमा)
आईपीएलमा कोलकाता र हैदराबाद भिड्दै, सुनील नारिनले ओपनिङ गर्लान् ?